XOG+DAAWO: Ahlu Suna oo labo garab u kala jabtay & Dhuusa-Mareeb oo ciidamadii ugu badnaa la keenay.
DHUUSA(P-TIMES)- Kooxda Ahlu Suna Waljameeca oo mudo dheer ahayd mid isku duuban ayaa ugu dambeyn hadda kala noqonaysa labo garab oo cabsi laga qabo in ay ku dagaalamaan Guriceel iyo Dhuusa-Mareeb oo ay gacanta ku hayeen mudo dheer.
Kala aragti duwanaanshaha labada dhinac wuxuu soo baxay markii ay dawladda Soomaaliya faragalin ku sameysay arrimaha gudaha ee Ahlu Suna, isla markaasna ay darajooyin ciidan si gaar ah u siisay maleeshiyaad ka amar-qaata ama la beel ah Madaxa Xukuumadda Galmudug Maxamed Shaakir.
Talaabadaas, waxay ka careysiisay Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Ahlu Suna Macalin Maxamuud, taas oo keentay cabsi laga qabo dagaalo cusub oo dhaca.
Ciidamadii ugu badnaa oo ah garabka Macalin Maxamuud kuna sugnaa magaalada Guriceel ayaa soo gaaray 02:30 duhurnimo waqtiga Soomaaliya, magaalada Dhuusa-Mareeb waxay adkeeyeen Amniga wadaadkooda.
Warar ayaa sheegaya in ay ciidamadaas doonayaan in ay si xoog ah ku qabsadan madaarka magaalada Dhuusa-Mareeb oo ay gacanta ku hayaan ciidamo katirsan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana xaaladdan ay tahay mid halisteeda leh.
Wariyayaasha kusugan magaalada Dhuusa-Mareeb ayaa sheegaya in xaaladdu u muuqato mid halis u ah dagaal dhexmara labada dhinac, waxaana haddii ay xabad dhacdo ay sheegeen in aysan Ahlu Suna si fudud iskugu soo laaban doonin.
Dawladda Soomaaliya, waxay u aragtaa fursad siyaasadeed oo ay doorashadaba uga weecin karto Dhuusa-Mareeb oo ay geyn doonto magaalada Cadaado, waxaana Hobyo kasocda qorshe kale oo ay ka walaacsan tahay kooxda NabAD iyo Nolol.
NIN YAHOW WAA MAALIN KHEYR AH WAX KHEYR SHEEG